९ महिनाकी गर्भवती भनिएकी महिलाको पेटमा बच्चा होइन अर्कै चिज भेटेपछि डाक्टर समेत चकित – Dainik Samchar
August 24, 2021 416
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु घटिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाही मानव श’रीरसँग स’म्बन्धित यस्ता घटनाहरु बाहिर आउँछन्, जसलाई देखेर चिकित्सा विज्ञान र डाक्टरहरु पनि छक्क पर्छन् ।
त्यस्तै एउटा घटना बेलायतबाट बाहिर आएको छ । त्यहाँ एक महिलालाई देख्दा लाग्छ कि उनी नौ महिनाकी ग ‘र्भ’ वती हुन् । तर जब डाक्टरहरुले उनको अ ‘परेशन गरे, एक धेरै चकित पार्ने कुरा बाहिर आयो । श ‘ल्यक्रि यापछि ती महिलाको पेटबाट एउटा शिशु होईन अरू केही बाहिर आयो । यो रोचक घटना स्टै फर्ड शायरमा देखिएको हो ।
‘द मेट्रो’ मा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार १९ वर्षीया ति महिलाको नाम अबी चा’डवि’क हो । अचानक उनको पेटमा दु’खाइ शुरू भयो, कहिले काहिँ दु’खाइ कम हुन्थ्यो त कहिले कहिले काहिँ बढ्ने पनि गरेको थियो । उनको पेट यति धेरै बढ्यो कि केहि महिनामा तौल पनि अचानक बढ्यो । मानिसहरु उनलाई गर्भवती सोचिरहेका थिए । मानिसहरु उनलाई नौ महिनाको गर्भवती भएको भन्दै पत्याउदै आएका थिए ।
तर ति युवतीले परीक्षण गराउने बिचार गरिन् । परीक्षणका लागि उनी डाक्टरकहाँ गइन् । परीक्षणपछि डाक्टरहरुले पेटमा ढुङ्गा वा पत्थरी रहेको कुरा पत्ता लगाए । त्यसपछि पुनः जाँच गर्दा जे देखियो त्यसले सबैको हो’स उ’डा’एको छ । उनको पेटमा एक ठूलो ढु’ङ्गा बनेको थियो । डाक्टरहरूले पत्ता लगाए कि ती महिलाको पेटमा १३ इन्चको ड’ल्ला थियो । यो ढु’ङ्गा ह’टाउन, डाक्टरहरुले उनलाई एक शल्यक्रिया गर्न सुझाव दिए । अन्ततः उनी श’ल्यक्रि’या गर्ने कुरामा सहमत भइन् ।
पश्चिमी मिडल्याण्डको एक अस्पतालमा भर्ना भइन् । दुई हप्ताको उपचारपछि, सो ढु’ङ्गा हटाइयो । त्यस क्रममा महिलाले धेरै पी’डा प’नि भो’ग्नु पर्यो । केहि दिन डाक्टरहरुको हेरचाहपछि ती महिला अहिले निको भैसकेकी छिन् । अब उनी घरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी छिन् । ती महिलाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो सम्पूर्ण घटनाको बारेमा उल्लेख गरेकी हुन् । उनले भनेकी छिन्, ‘म शायद यो (ढु’ङ्गा) संगै जन्मेकी थिएँ, जुन समयसंगै बढ्यो र मलाई यो थाहा भएन् ।
यदि मैले यो देखेको हुन्थिन् भने यो फु’ट्न सक्थ्यो वा जे पनि हुन सक्थ्यो । किनकि मेरो पेट ढु’ङ्गा जस्तै क’डा भएको थियो । जब म किनमेलको लागि बाहिर जान्थे मानिसहरु मलाई नौ महिनाको गर्भवती भन्थे ।’ उनले चाहेर पनि तौल घटाउन सकिरहेकी थिइनन् ।
एउटा फुटबल आकारको ढुङ्गा फा’लेपछि अब उनी ढुक्क भएकी छिन् । श ‘ल्यक्रि ‘या पछि आफु पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएको पनि उनले पोस्टमार्फत जानकारी दिएकी छिन् । उनको तौल अझै पनि कम भएको छैन । तर अब उनी यसलाई घटाउन क’डा मेहनत गर्दैछिन् ।
Prevदिपाश्रीले खोलिन पूर्वप्रेमीलाई छाडनुको रहष्य
Nextगोसाइँकुण्ड मेलामा नसोचेको भयो, थेग्नै हम्मेहम्मे पर्‍यो
बैंक तथा वित्तीय संस्था एक साताका लागि बन्द, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो यस्तो सूचना !
खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य नसोच्ने गरी यस्तो भयो।आयो दुःखको खबर
पल शाहलाई भेटेर आए लगत्तै रमेश उप्रेती लेखे यस्तो स्टाटस
कन्या राशिलाई व्यापार, वृश्चिकलाई जागिरः कुन राशी भएका व्यक्तिलाई कुन पेसा शुभ ?
सेतो पानी बगिरहने समस्याले हैरान हनुहुन्छ ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार ! (17222)
विराटनगरमा प्रहरीले गर्‍यो उर्मिलाको अन्तिम बिदाइ, उदयपुरमा अ ,,न्त्ये ष्टि गरिने (13135)
गठबन्धनकै भयो बेईज्जत, ९ सय गन्दा पायो जम्मा १२ मत (8943)
केशव स्थापितले आफ्नो वडामा लिए अग्रता, बालेन दोस्रो (8729)
उपमेयरमा जितेलगत्तै कोसँग बिहे गर्दै छिन् सुनिता डंगोलले ? (8394)
बालेनको चर्चित चस्मा : बजारमा उच्च माग, कति पर्छ मूल्य ? (8100)
चितवनमा एमालेले लियो अग्रता, गठबन्धनलाई पछि पार्यो (7858)
यौ,न दु,र्व्य वहारको घट,नामा नाम जोडिएपछि माल्भिकाले माफी माग्दै के भनिन्? (7229)
बालेन साहलाई पुत्री लाभ (7187)
पुन्य गौतमले, बालेन शाह अमिरिकन एजेन्ट भएको खुलासा गरे, देखाए यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित) (7177)
पाँच मिनेटमै अनावश्यक रौँ हटाउन यसरी प्रयोग गनुृहोस् कोलगेट, आउने छैन फेरि
बालेनले मेयर जिते गहना खरिद गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट
बाथरुममा १ कचौरा नुन राख्नुहोस्, चम्किनेछ तपाईको भाग्य